Wararka - Sida loo doorto barkin 2
Barkinta ugu fiican ee leh saameyn daaweyn ah oo ku dhaca qanjirrada ilmo-galeenka ayaa ah barkin xumbo ah oo kuleylka kuleylka ah. Guud ahaan, dadka laf-dhabarka ilmo-galeenka oo liita waxay doortaan barkimooyin Kangjin Shule ah oo ka samaysan barkimooyin xumbo kulul, maxaa yeelay qaabka barkinku waa inuu marka hore la jaanqaadaa jirka caadiga ah ee jirka bina-aadamka. Qallooca ayaa ka dhigaya inuu ku soo laabto meertada jir ahaaneed ee habka neef-mareenka iyadoon loo eegin dhabarka, dhinaca, laf-dhabarka ilmo-galeenka inta lagu jiro hurdada. Isla mar ahaantaana, xoogga taageeraya iyo jilicsanaanta barkinku way ka xasilloon yihiin barkinta xusuusta tartiib tartiib ah ee soo noqoshada sababtoo ah adeegsiga isbuunyo qaas ah oo heerkulku ku kulmo heerkul sarreeya. , Iyadoo la raacayo mabaadi'da ergonomic, oo ay weheliso daaweynta magnetic-ka ee ay samaysay NdFeB magnetic ore, waxay ku habboon tahay hagaajinta raaxo-darrada ilmo-galeenka, si wax ku ool ah kor loogu qaado wareegga dhiigga, baabi'inta daalka qoorta iyo xanuunka, iyo yareynta wareejinta aan loo baahnayn inta lagu jiro hurdada.
Kuwa qaba dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, filimku wuxuu muujinayaa maqaarka afka ilmagaleenka herniated iyo / ama lafaha hyperplasia ee cirifka dambe ee jirka vertebral, taas oo u noqon karta cadaadis toos ah lafdhabarta. Barkinku waxyar wuu ka hoosayn karaa, laakiin madaxa iyo luqunta waa inaan si xad dhaaf ah dib loogu laaban; kabuubyada xubnaha, iwm. Dhibaatooyinka dareenka ayaa ah kuwa ugu muhiimsan. Kuwa looga shakisan yahay inay ku cadaadinayaan laf-dhabarka laf-dhabarka marinka laf-dhabarka, barkinku wax yar ayuu ka sarrayn karaa; loogu talagalay stenosis laf-dhabarka ilmo-galeenka koritaanka iyo lafaha hyperplasia ee cirifka dambe ee jirka vertebral, barkinku waa inuu ahaadaa mid jir ahaaneed; ankylosing spondylitis waa in lagu hayaa marxaladda hore Mawqifka dhexdhexaadka ah. Si si wax ku ool ah loogu ilaaliyo jilicsanaanta jir ahaaneed ee laf-dhabarka ilmo-galeenka iyo si buuxda u dabciso murqaha qoorta, barkimadu waa in lagu hagaajiyaa qaab u eg salka oo leh dhexda hoose, dhammaadka sare, qoorta oo waxoogaa ka sarraysa iyo garabyada garabka, iyo dhinacyada ka soo horjeedka oo hooseeya. waxaa badanaa loo yaqaan barkin u eg B. .
Aqoon badan ayaa jirta marka la dooranayo barkimooyinka
Si loo doorto barkin sax ah, waa inaan marka hore fahamno habka barkin saxan. In kasta oo la sheegay inay tahay "barkin", "barkinta qoorta" runti waa ta saxda ah. Waa inuu noqdaa qoorta u dhexeysa dhabarka dambe ee madaxa iyo garbaha, oo taageera qoorta inta lagu jiro hurdo dheer. Markaad dhabarka u jiifto, barta ugu sarreysa ee barkinku waa inay ahaataa dhexda dambe ee qoorta si ay u taageerto qalooca qoorta una ilaaliso qalooc jireed ee qoorta. Barkinta ugu hooseysa waa madaxa gadaashiisa; markaad jiifto dhinaca, barkimadu waxay taageertaa dhinaca qoorta. Waa suurtagal in lafdhabarta lagu haayo xariiq toosan marka laga fiiriyo xagga hore iyo qaabka caadiga ah ee S-ga (oo la jaanqaadaya qallooca jirka) marka laga eego dhinaca. Barkin-daryeel-caafimaadeedku waxay aad ugu habboon tahay qalooca jireed ee jirka bini'aadamka qaabkiisa "hore iyo gadaal hoose". Inta lagu jiro hurdada, barkinku wuxuu si fiican ugu habboon yahay laf-dhabarka ilmo-galeenka wuxuuna taageeraa laf-dhabarka ilmo-galeenka. Waxay ku habboon tahay dadka jecel inay dhabarka u seexdaan.
Waqtigan xaadirka ah, barkimooyinka waxaa ka buuxa waxyaabo kala duwan, sida faybar kiimiko ah, cinjirka dambe, hoos, baalasha buckwheat materials Qalabka kala duwan wuxuu leeyahay waqtiyo soo noqnoqasho oo kala duwan, waqtiga ku celiska fiicana waa 3-5 seken. Barkimooyinku waxay leeyihiin nolol adeeg, oo u dhexeysa lix bilood illaa saddex sano. Muddo dheer kadib isticmaalka, dhibaatooyinka sida luminta dabacsanaanta, gabowga, iyo caarada ayaa dhici doonta. Dhexdooda, barkimooyinka kiimikada kiimikada ayaa ah kuwa ugu badan, laakiin ma ahan kuwo neefsasho badan leh, gaar ahaan dhowr bilood oo la isticmaalo ka dib, way fududahay in la isku duubnaado oo la rogrogo. Barkimmada hoose waa kuwo jilicsan oo raaxo leh in la seexdo, laakiin way adag tahay in la ilaaliyo dherer cayiman. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku isticmaasho barkin adag.